विभेदको अन्त्य गरौं - Pradesh Today
Homeसम्पादकीयविभेदको अन्त्य गरौं
विभेदको अन्त्य गरौं
समाजमा अझैपनि महिला र पुरुषबीचको विभेद कायमै छ । महिला र पुरुषबीचको विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न प्रयासहरु पनि भएका छन् तर सार्थक बन्न सकिरहेको देखिदैन् ।
परम्परागत मूल्य मान्यता र पितृसत्तात्मक सोचका कारण घरपरिवा, गाउँ समाजबाट नै लैंगीक हिंसाका घटनाहरु हुने गरेका छन् । समाज शिक्षित बन्दै जाँदा महिला र पुरुषबीचको विभेद अन्त्य हुन नसक्नु नेपाली समाजका लागि लज्जास्पद कुरा हो । नेपाली समाजमा पुरूषको तुलनामा महिला बढी हिंसामा पर्ने गरेका छन् ।
घरदेखि कार्यालयसम्म महिला र पुरुषबीचको विभेद अन्त्य हुन सकिरहेको छैन् । महिलाहरु घरबाहिर निस्कनु हुँदैन् परम्परागत सोचले नेपाली समाज उठ्न नसकिरहेको देखिन्छ । कार्यालयमा पनि पुरुष कर्मचारीले महिलालाई गर्ने व्यवहार होस् या महिलालाई पारिश्रमिक दिने कुरामा होस् अहिले पनि भिन्नता देखिने गरेको छ ।
महिलाका अधिकार रक्षाका लागि विभिन्न तवरबाट कुरा उठ्ने गरेका छन् तर त्यसले सार्थकरुप पाउन सकिरहेको छैन् । अझ भनौं समाजमा महिला नै महिलामाथि थिचोमिचो गर्ने प्रचलन पनि कायमै छ ।
महिला हिंसाका घटना पुरुषबाट मात्र भएका छैनन् महिलाहरुबाटै पनि हुने गरेका विभिन्न घटनाहरु पनि बाहिर आउने गरेका छन् । सासूले बुहारीलाई, बुहारीले सासूलाई विभिन्न लान्छना लगाएर भएका कुटपिटका घटना पनि बाहिर आउने गरेका छन् । अनि महिलाले पुरुषमाथि गरेका हिंसा पनि विस्तारै समाजमा आउने गरेका छन् ।
पुरुषले सबै घटना बाहिर नल्याउने गरेका कारण पनि महिलाबाट पुरुष हिंसाका घटना भएका कम बाहिर आउने गरेका छन् । यि सबै घटना भनेको लैंगीक हिंसाका घटना हुन् । महिलाले पुरुषलाई र पुरुषले महिलालाई गर्ने हिंसा अन्त्यका लागि लैंगीक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन हुने गरेको छ । यसले पनि समाज परिवर्तनमा केही भूमिका खेलेपनि अझै सार्थक बन्न सकिरहेको छैन् ।
पछिल्लो समयमा त झन महिला अधिकारका लागि लड्ने अभियान्ताहरु नै हिंसामा पर्ने गरेका घटना बाहिर आउने गरेका छन् । पीडितले उजुरी दिएकै आधारमा पीडक पक्ष शक्तिशाली बन्न खोज्दा महिलाअधिकारकर्मिहरु पनि हिंसामा पर्ने गरेका छन् । पीडक कतिपय व्यक्तिहरु त आफू नदेखिएर अधिकारकर्मीलाई धम्की दिने, डर त्रास देखाउने र दुव्र्यवहार गर्ने गरेका छन् ।
महिला अधिकारकर्मीलाई राजनैतिक दलका ठूला नेताहरु स्वयम् फोन गरेर कामलाई बाधा पु¥याउने गरेका छन् । महिलाहरुको अधिकारका लागि विभिन्न संघसंस्था, प्रहरी प्रशासन, सरकारी कार्यालयलगायतका विभिन्न ठाउँमा जाँदै गर्दा विभिन्न संघसंस्था, राजनैतिक दल, पीडक पक्षका पहुँचवाला व्यक्तिहरुले किन यो काम गरेको ? कसका लागि गरेको ? यो काम गरे के मिल्छ ? भन्नेजस्ता प्रश्न गरी मानसिक यातना दिने, काममा अवरोध ल्याउन खोज्नेलगायतका व्यवहार अधिकारकर्मीले खेप्ने गरेका छन् ।